Tafura Inovhara Fekitori | China Tafura Inovhara Vagadziri uye Vatengesi
Tambanudza Tafura Inovhara neRakavhurika Back
Rudzi rwemachira etafura, inozivikanwawo seye tafura yekuvhara tafura, yakakwana kune chero chiitiko chakakosha, ratidziro yekutengesa, musangano kana imba yekuratidzira. Hollow yekumashure-yekunze inopa kuvhura kumashure kuti iwe ugone kugara kuseri kwetafura yako usingavhiringidze tafura yekuvhara.
Round Kutambanudza Tafura Topper
Round kutambanudza tafura topper isarudzo yakanaka kuita yako yechiitiko tafura iratidzike yakapinza uye yakashongedzwa. Zvakare, inogona kushandiswa kuchengetedza tafura yako yepamusoro kubva pakupfeka kwemazuva ese, kunyanya kufamba uchidzoka kuenda kumberi kune zviitiko uye zvekuratidzira.
Kuuya nemhando dzakasiyana-siyana, tsika yakatambanudzwa tafura toppers inzira inodhura yekugadzira tafura inoratidzika.
Tsika Yakadhindwa Tafura Vanomhanya
Inofanirwa nezviitiko zvakasiyana zvekushambadzira, zvekushambadzira zviratidziro, uye zvitsva zvigadzirwa zvigadzirwa, iyo tsika tafura mumhanyi anogona kuita yakadzika uye yakasimba pfungwa kune vanhu vari "vari kuenda". Dhinda mapuroguro uye marogu patafura inomhanya, yako yakakosha meseji inosvika kune vanhu mukati memaminitsi.
8ft Inoshandurwa Tafura Inovhara
Iyo inoshandurwa kana inogadziridzwa tafura yekuvhara yakakwana kune dzakasiyana zviitiko zvekushambadzira, kuratidzira, zvekutengeserana zvinoratidza uye zvimwe. Uine tafura yakanaka inoshandurwa, iwe unowana mhinduro mbiri dzakasiyana, sezvo tafura yedu ichikanda haigone kungoshandurwa kubva pa8ft kukanda kuenda 6ft kukanda asiwo kubva ku8ft kukanda kuenda ku6ft yakafukidzwa kavha.
Tafura Inovhara neVhura Kudzoka
Mhando yetafura inokanda kana chifukidziro chetafura ndeimwe yemhando dzepasirose mumatafura edu ekuunganidza ayo anowanzoshandiswa pakutaridza, kuratidza kana kuratidzira. Dhizaini dhizaini uye yakachena yekucheka inoita kuti ifarirwe nevazhinji vanoratidza-vanoenda. Kana iwe uchida kuratidza yako brand kana logo, 3-padivi tsika yakadhindwa machira etafura zvirokwazvo ndiwo ako akanakisa sarudzo.
Standard Kukanda Style Tafura Inovhara
Iine yakajeka uye yakachena dhizaini, iyo tsika tafura yekukanda inogona kusimbisa yako brand, logo kana rakakosha meseji iwe raunoda kuratidza uye kuburitsa. Iyi ndiyo mhando yedu yakapusa, asi yakanyanya kusarudzika iyo inowanzo shandiswa pakuratidzira kana kuratidzira.
Yambuka-Tambanudza Tafura Inovhara
Kugadzikika kweichi chivharo chetafura chinotambanudza kuchakubatsira iwe kushandura kutaridzika kwematafura ako ipapo pasina kutenga zvimwe zvigadzirwa. Iyo tsika yekuyambuka-tafura tafura inokosheswa kune dzakasiyana siyana kuratidzira, magungano, misangano uye zvekushambadzira zviratidziro sezvo aya akasarudzika tafura inokanda ine reversible divi sezvo iyo yakatambanudzwa zvinhu inodhonzwa pasi kufukidza tafura makumbo.